Semalt को साथ तपाइँको लिंक को रस बढ़ावा
त्यसोभए, तपाईंसँग एक व्यवसाय, एक वेबसाइट र तपाईं लगातार मूल सामग्री सिर्जना - एसईओ सफलता को लागी सबै कुञ्जी सामग्री। त्यहाँ एक मात्र समस्या छ। व्यक्तिहरू तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गरिरहेका छैनन्।
यो व्यवसायका मालिकहरूको लागि सामान्य समस्या हो जुन उत्पादन र सेवाहरू अनलाइन बढावा दिइरहेका छन्। विश्वव्यापी वेब एक भीडभाड ठाँउ हो र तपाईले प्रतियोगिताको बिरूद्ध बाहिर खडा हुन चिच्याउनु पर्छ। तर जब त्यसले कार्य गर्दैन, तपाईं कसरी अरू याद गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यो गर्नको लागि एक प्रभावकारी तरीका अन्य एसईओलाई बढावा दिनको लागि अन्य सम्बन्धित वेबसाइटहरूबाट लिod्क परिचय दिएर हो। एसईओ संसारमा, यो लि building्क निर्माणको रूपमा चिनिन्छ, वा यो Semalt मा परिचित छ, लिंक जुस बढाएको।
एकदम सरल लाग्दछ तर कहाँ सुरु गर्ने र जान्ने को लागी। तपाइँको साइटमा लिंक गर्न अन्य वेबसाइटहरू कसरी प्राप्त गर्ने भनेर केही ज्ञान र विशेषज्ञता लिन्छ। तपाईं आफ्नो वेबसाईटमा लिंक गर्ने कुनै पनि वेबसाइटहरू पनि चाहनुहुन्न।
रणनीति खेलको नाम हो जब यो लिंकको रसलाई बढावा दिन आउँदछ। तर पहिले, यहाँ एसईओको द्रुत सिंहावलोकन हो र लि building्क भवन समग्र एसईओ योजनाको एक हिस्सा हो।
विश्लेषण र कीवर्ड अनुसन्धान
लिंक भवन SEO लाइन तल केहि कदमहरू तल छ। लिंक जुसलाई बढावा दिन सुरू गर्नु अघि, केहि अन्य एसईओ कार्यहरू पहिले सूचीबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ, जस्तै विश्लेषण र कीवर्ड अनुसन्धान।
विश्लेषणले के काम गर्दछ भनेर जाँच्न समावेश गर्दछ। , के गर्दैन र वेबसाइटमा अनुकूलित गर्नको लागि योजनामा ​​राख्दछ। यसले संरचनात्मक परिवर्तनहरू, फिक्सिंग त्रुटिहरू र प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा जानकारी एकत्रित गर्न तिनीहरूको कार्यहरूको पूर्वानुमान गर्न र खेल अगाडि रहन सक्छ।
खोजशब्द अनुसन्धान पनि प्रारम्भिक विश्लेषणको क्रममा हुन्छ। र SEO कार्यान्वयनको आधारभूत अंश हो। जब व्यक्ति अनलाइन जानकारीको लागि खोजी गर्दैछन्, तिनीहरू खोज कुञ्जी वा वाक्यांश टाइप गर्दछ गुगल जस्तै खोज ईन्जिनमा, अधिक प्रासंगिक परिणामहरू जैविक परिणामहरूको शीर्षमा देखा पर्दछ।
तपाईको व्यवसायका लागि सब भन्दा सान्दर्भिक व्यावसायिक कुञ्जी शव्दहरूको अनुसन्धान र पहिचान गर्नु सम्भव सबैभन्दा ठूलो लक्षित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण छ। ती ट्राफिक-उत्पादन गर्ने कुञ्जी शब्दहरू पदोन्नतिको लागि विभिन्न वेबसाइट पृष्ठहरूमा वितरण गर्न सकिन्छ।
लिंक निर्माण र एसईओ
अर्को चरण पूरा गर्न आन्तरिक अनुकूलन हो आधारभूत गुगल खोजी ईन्जिन रैंकिंग मापदण्ड र एसईओ प्रक्रिया सकेसम्म कुशल छ भन्ने सुनिश्चित गर्न। यसलाई वसन्तको रूपमा सफा र सोझो लुका टुक्राहरूको रूपमा सोच्नुहोस्।
वेबसाइट राम्रो स्थितिमा आइसके पछि बाह्य अनुकूलन लिंक निर्माणको साथ सुरू हुन्छ। प्रक्रिया वेबसाइट लि juice्क रसको विश्लेषणबाट सुरू हुन्छ, खराब वा अनावश्यक लि of्कहरू हटाउने र नयाँ लि for्कहरूको लागि उपयुक्त ठाउँहरू पहिचान गरेर।
niche- Links Link सम्बन्धित वेब स्रोतहरू तब उत्तम सम्भव खोज इञ्जिन नतीजाहरूको लागि अद्वितीय उच्च-गुणवत्ता सामग्री भित्र राखिन्छ। यस कारणले गर्दा, Semalt सँग आला विषयहरूमा 50०,००० भन्दा बढी पार्टनर साइटहरूको डाटाबेस छ जुन टोली द्वारा होशियारीसाथ डोमेन नाम र Google रैंक ट्रस्टको आधारमा चयन गरिएको छ।
अहिले तपाईले आफैलाई सोध्नु भएको छ, कसरी यसले वास्तवमै अधिक वेबसाईट ट्राफिक उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ? मूल रूपमा, बाह्य लि links्कहरूले गुगल जस्ता खोजी ईन्जिनहरूलाई बताउँदछन् कि एक वेबसाइटमा क्वालिटी सामग्री छ जुन अन्य उच्च-साइट साइटहरू द्वारा प्रमाणित गरिएको छ। साथै, एक वेबसाइटले अधिक गुण ब्याकलिks्कहरू, गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्षमा पुग्न सजिलो छ।
ती नयाँ SEO र लिंक निर्माणको लागि, यो लिन धेरै जानकारी लिनुपर्दछ। धन्यबाद, त्यहाँ SEO विशेषज्ञहरु छन् Semalt जस्ता व्यापारहरुलाई उनीहरुको अनलाइन उपस्थिति बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।
Semalt का साथ काम
ठीक छ। व्यावहारिक विवरणहरूमा तल ओर्लौं। को र Semalt के हो?
Semalt पूर्ण-स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी हो जो किभ, युक्रेनमा स्थित छ र यूट्यूबको जरा दृढ रूपमा डिजिटल टेक्नोलोजीमा राखिएको छ। Semalt को मिशन एसईओ, वेब विकास र उन्नत एनालिटिक्स सेवाहरू, साथै व्याख्याकर्ता भिडियो सामग्री सिर्जना मार्फत अनलाईन व्यवसायहरूलाई सफल बनाउनु हो।
Semalt भन्दा बढिको टोली हो। १०० रचनात्मक आईटी र मार्केटिंग पेशेवरहरू - अधिक निवासी पालतू कछुवा टर्बो। सँगै काम गरेर र वर्षौंको विशेषज्ञता साझेदारी गरेर, Semalt टोलीले Google खोज परिणामहरूमा शीर्ष स्पटहरूमा देखा पर्दै ग्राहकलाई अनलाइन सुनमा पुग्न मद्दत गर्न मूल एसईओ समाधानहरू सिर्जना गरेको छ।
गुगल-टोपमा पुग्नाले केवल ब्यापारको प्रोफाइल मात्र बढाउँदैन र वेब ट्राफिक बढाउँदछ, तर ती अतिरिक्त आगन्तुकहरू ग्राहक बन्न सक्छन्, जसले अन्तत: बिक्रीमा बृद्धि गर्दछ।
तिनीहरूले यो कसरी गर्छन्? सामान्यतया, Semalt दुई मुख्य सेवाहरू छन्: AutoSEO र FullSEO।
AutoSEO एक उपयोगी सेवा हो भर्खरको एसईओ यात्रामा सुरूवात गर्नेहरूका लागि। यो एउटा साना व्यवसायका लागि डिजाइन गरिएको उपकरण हो जुन साइट ट्राफिक बढाउन चाहान्छ तर SEO टेकनीकसँग परिचित हुन सक्दैन र उनीहरूले वास्तविक नतिजाहरू नदेखे सम्म ठूलो लगानी गर्न चाहँदैन।
सेवा त्रुटिहरूको पहिचान गर्न र सुधार गर्न एसईओ विशेषज्ञद्वारा पूर्ण विश्लेषण पछि वेबसाइटको हालको स्थितिमा एक संक्षिप्त रिपोर्टको साथ शुरू हुन्छ। एक एसईओ ईन्जिनियर तब ट्राफिक-उत्पादित कीवर्डहरू छनोट गर्दछ जुन वेबसाइट र यसले बढावा दिने व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। अर्को, Semalt को टेक्नोलोजी को आला सम्बन्धित वेब संसाधनहरु को लागी मूल्यवान लिंक को निर्माण शुरू गर्दछ।
सबै उपकरणहरु एक पटक हुन्छ, Semalt टोली कसरी दैनिक अपडेट प्रदान गर्दछ कसरी प्रचारित कुञ्जी शव्दहरू रैंकिंग गर्दैछन्, र नियमित विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू अभियान प्रभावकारिता मूल्या .्कन गर्न।
पूर्ण एसईओ एक एकीकृत एसईओ हो समाधान र ठूला व्यवसायका लागि सिफारिस गरिएको हो, धेरै कम्पनीहरूका व्यक्तिहरू, वा वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न र एसईओको उपयोग गर्न अलि बढी पैसा लगानी गर्न तयार हुनेहरूको लागि।
The FullSEO सेवाले AutoSEO लाई समान सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्दछ, तर समाधानहरू गहन विश्लेषण र प्रतिस्पर्धीहरूको समीक्षामा आधारित छ एक उच्च रूपान्तरण दरको साथ महत्वपूर्ण वेबसाइट ट्राफिक वृद्धि ग्यारेन्टी गर्न। संक्षेपमा, यो गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्षमा एक वेबसाइट पठाउनको लागि एक उपकरण हो - छिटो।
यो साइटको आन्तरिक अनुकूलन गरेर र त्रुटिहरू ठीक गरेर, जस्तै सिर्जना गर्ने द्वारा गरिन्छ कुञ्जी शव्दहरूको लागि मेटा ट्यागहरू, वेबसाइट HTML कोड सुधार गर्ने, टुटेको लिंकहरू हटाउने र वेबसाइट इन्टरलिinking्क विस्तार गर्ने। अन्य लाभहरूमा Semalt बाट वेबसाइट विकासको लागि पूर्ण सहयोग, Semalt का लेखकहरू द्वारा एसईओ-अनुकूल सामग्री को निर्माण, र वेबसाइट विश्लेषकको एक स्वस्थ खुराक समावेश छ। परिणाम लगानी र दीर्घकालीन परिणामहरूमा सकारात्मक प्रतिफल हो।
लिंक निर्माण परिणाम हुन्छ
यो नयाँ सिद्धान्त वा समाधानमा सिद्धान्त पढ्न सधैं उत्तम छ, तर यो अझ राम्रो छ जब यसको प्रमाण छ भने यो अझ राम्रो छ। वास्तविक जीवनमा काम गर्दछ।
Semalt ले संसारभरि 5,000००० भन्दा बढी वेबसाइटमा काम गरिसकेको छ, जसमा एक उच्च गुणवत्ताको इलेक्ट्रोनिकको लागि अमेरिकामा आधारित ई-वाणिज्य स्टोर हो। उपकरण र कम्प्युटर आपूर्ति।
कम्प्युटर र सहायक उपकरणहरूको लागि अनलाइन बजार प्रतिस्पर्धी छ र त्यसैले व्यस्त वातावरणमा ध्यान पाउनु व्यवसायको लागि गाह्रो साबित भइरहेको थियो। Semalt को लागि मुख्य उद्देश्य भनेको ट्राफिक बढाउन डोमेन प्रोफाईललाई बढावा दिनु र उत्पाद पृष्ठहरूलाई गुगलमा उच्च श्रेणीकरण गर्न सहयोग गर्नु थियो।
यो कस्टमाइज गरिएको लिंक निर्माण अभियान र सामान्य प्रश्नहरू, उत्पादन कोटीहरू र अन्य शब्दहरूको प्रबर्द्धनमा ध्यान केन्द्रितको माध्यमले फुलसेओ प्याकेजको साथ मात्र चार महिना पछि प्राप्त भयो। वेबसाइटमा उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित।
छोटो समयमा वेबसाइटमा कार्बनिक यातायात तीन गुणा बढ्यो, र व्यापार गुगलमा शीर्ष तीन खोजी परिणामहरूमा देखा पर्‍यो। धेरै कुञ्जी शव्दहरूको लागि, एसईओ र लि building्क भवन कती प्रभावकारी हुन्छ भनेर देखाउँदै।
तपाईं यस केस स्टडीको बारेमा बढी पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ।
को साथ सुरू गर्नु
एक अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक आधारको साथ एक ग्लोबल कम्पनीको रूपमा, यो एक साधारण फेला पार्न सजिलो छ। Semalt को साथ काम गर्दा भाषा। टोलीका सदस्यहरूले अ ,्ग्रेजी, फ्रेन्च, इटालियन र टर्की भाषाका साथै धेरै अन्य भाषाहरू बोल्दछन्। स्वास्थ्य र स्वास्थ्य, टेक्नोलोजी र सम्पत्ती सम्मका व्यवसायको साथ विश्व। धेरै खुसी ग्राहकहरूले Semalt लगातार Google र फेसबुक मा शीर्ष समीक्षा प्राप्त गर्दै सकारात्मक परिणाम रिपोर्ट गरेका छन्।
Semalt को विशेषज्ञताको नमूना खोज्नेहरूका लागि पूर्ण FSEO सेवामा सिधा जानु अघि ग्राहकहरू AutoSEO लाई १ days दिनको लागि मात्र trial ०.99 for मा परीक्षण गर्न सक्दछन्। यो एक महिना, तीन महिना, छ महिना वा एक बर्षको लागि चलाउन योजना छनौट गर्न विकल्पको साथ अनुगमन गरिएको छ।
र अन्तमा, Semalt ले ग्राहक समर्थन २ 24/7 प्रदान गर्दछ, यसको मतलब यो हो कि तपाईं जहाँसुकै संसारमा हुनुहुन्छ, तपाईं टोलीको कुनै सदस्यलाई मद्दत र सल्लाहको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको वेबसाइट को बारे मा।